Tovovavy tsara tarehy Mampiaraka | «Mampiaraka ny fanambadiana»
Alohan’ny famoahana ho azo antoka misoratra anarana Ianao ho antsika, afa-tsy amin’ity tranga ity ny an-tsaha dia ho hita mba hanolotra vaovao, dia avoaka ao amin’ny fahana ihany lahatsoratra mpanjifa. Amin’izao fotoana izao, manaiky ny hafatra avy amin’ireo olona efa mihoatra ny taona ihany no niandraikitra.
Eo ambany — maimaim-poana, fa afa-tsy fomba iray: amin’ny tanàna, taona, Fialam-boly sy ny tsara sary. Ankizivavy, izahay dia manaiky ny lahatsoratra, raha ny tantara no mihoatra ny iray volana, sandoka tsinontsinoavina, dia ny karama.
Raha toa ianao ka mitady ny Fiarahana, dia milaza izany sy manoratra noho izay an-tanàna Ianao. Ny lahatsoratra avy amin’ny filaharana (eo ho eo am-piandrasana ny fotoana — andro) — fifandraisana hafatra manokana ny fiaraha-monina.
Haingana fametrahana saran’ny